अबको राष्ट्रिय कृषि नीति यस्तो हुनुपर्छ
विषय प्रवेशनीति के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने बिषय समाहित भएको दस्तावेज हो । यसमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम् परिचालनमार्फत उद्येश्य प्राप्तिका खातिर अनेकौ उपाय समावेश गरिएको पाइन्छ । सरकारी निकायमार्फत बनाईने यस प्रकारका नीतिमा बृहत तथा व्यापक हित प्रबर्द्धन गर्ने बिषय हुन्छन् । यो सरकारको नीति मात्रमा सिमित रहँदैन । यो सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदाका बखतमा पनि सार्वजनिक नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको हुनु हुँदैन । त्यसैले… पुरा पढौ
अनलाइन सपिङ स्टोर ग्यापु मार्केटप्लेस र मेरो एग्रो प्रालिले करेसाबारी र कौसी खेतीबारे निशुल्क अनलाइन तालिम दिने भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो चार बजे जुम मिटिङरुममा सुरु हुने तालिम सप्ताहिक रुपमा एक महिनासम्म चल्नेछ। तालिम ग्यापु मार्केटप्लेसको फेसबुक पेजबाट समेत लाइभ हेर्न सकिनेछ। इच्छुक जो कोहि तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्। जुम मिटिङको आइडी 857 0792 9547 र पासवर्ड agrogyapu छ। तालिममा अर्ग्यानिक तराकारी खेतिको आवश्यकता, माटोको तयारी, बाली छनौट, बेर्ना उत्पादन,… पुरा पढौ
राइनासको मजुवामा आधुनिक बाख्रा फार्म सञ्चालनमा
लमजुङ जिल्लाको राईनास नगरपालिका वडा नं. २ मजुवामा आधुनिक बाख्रा फार्म सञ्चालनमा आएको छ । कृषिमा आत्मर्निभर बनाउने सरकारले घोषणा गरिरहेको अवस्थामा युवाहरू ब्यवसायिक कृषिमा प्रवेश गर्न थालेका हुन् । लामो समय विदेशमा बिताएका प्रेम अम्गाईले १ सय वटा बाख्रा अट्ने आधुनिक खोर निर्माण गरि ब्यवसाय शुरु गरेका हुन् । अम्गाई फार्म दर्ता गरी उनले उन्नत जातको बाख्रापालन गर्न लागेका हुन् । उनले बोयर लगायतका बाख्रा पालन शुरु गरेका छन्… पुरा पढौ
मौरीबाटै विष उत्पादन !
मौरीपालन मह उत्पादनका लागि गरिन्छ । तर ‘विष’ समेत उत्पादन लिन सकिन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । भक्तपुर–१ रामनगरमा सञ्चालित गोर्खा मौरी फार्मले विष अर्थात ‘वि–भेनम’ उत्पादन लिने काम सुरु गरेको छ । ‘मौरीको संरक्षण गर्ने हतियार खिल’ अर्थात ‘वि–भेनम’ संकलन सुरु गरेका छौँ,’ सञ्चालक प्रोफेसर डा. खेमराज न्यौपानेले भने, ‘खिल खाद्य वस्तु होइन, तर कैयन रोगको उपचार गर्ने औषधि बनाउन उपयोग हुन्छ ।’ उनका अनुसार १० हजार मौरीबाट १… पुरा पढौ
अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले कक्षामा पढाइ नहुँदा समय कसरी बिताउँछन् होला ? सायद धेरै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले साथीभाइसँग खेलेर वा आपसमा रमाइलो गर्दै समय काट्छन् होला । तर, बागलुङको नगरपालिकास्थित सिगाना माध्यमिक विद्यालय तित्याङका छात्र÷छात्रा खेलेर होइन, व्यवहारिक सीप सिक्न व्यस्त छन् । विद्यालयले १ वर्षदेखि विद्यार्थीको फुर्सदको समयलाई व्यवहारिक अभ्यासमा परिचालन गराएको छ । उनीहरू कक्षामा शिक्षक अनुपस्थित हुँदा र खाजा खाने समयलाई सदुपयोग गर्दै विद्यालय वरपर केरा र सुन्तला… पुरा पढौ
२० महिनासम्म पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, बोर्ड, र समितिका प्रमुखको नियुक्ति गर्न नसकेपछि चक्रपाणी खनाल मन्त्रीबाट पदमुक्त भए । खनाल पदमुक्त भएपछि कृषि मन्त्री भएका नेकपा नेता घनश्याम मन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, बोर्ड र समितिका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । त्यसका लागि उनले बिहीबार रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचना निकालेका छन् । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि अध्यक्ष र प्रबन्ध संचालक दुवै… पुरा पढौ
बंगलादेशमा भएको एभीसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। दोस्रो खेलमा नेपालले सोमबार किर्गिस्तानमाथि ३–० को जित हात पार्यो। यसअघि नेपालले अफगानिस्तानमाथि ३–० कै सोझो जित निकालेको थियो। ढाका मिरपुरस्थित शहिद शुरवार्दी इन्डोर हलमा भएको खेलमा नेपालले किर्गिस्तानलाई पहिलो सेटमा २५–१५, दोस्रो सेटमा २५–१९ र तेस्रो सेटमा २५– २० ले पराजित गरेको हो । जितसँगै नेपालले दुई खेलबाट ६ अंक जोडेको छ।… पुरा पढौ
कुस्मा नगरपालिका–९, कटुवाचौपारीका कृषक हरि अधिकारीलाई अहिले हाइब्रिड जातको धान लगाएकामा पछुतो भएकोे छ । थोरै जमीनमा पनि धेरै उत्पादन हुने आशामा वर्णशङ्कर जातको धान लगाका उनको धानका बालामा कालो पोके नामक ढुसीको प्रकोप फैलिएको छ । उनले भने, ‘धेरै फल्छ भनेर छिमेकीका अरूले झै मैले पनि अघिल्लो वर्षदेखि नै हाइब्रिड जातको बीउ लगाउँदै आएको थिएँ तर अहिले धानको बालामा कालो पोके मात्र छ ।’ कुटवाचौपारीका हरिजस्तै हाइब्रिड जातको धान… पुरा पढौ
चितवनको १ मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले फलफूलको बिरुवा हुर्काउने किसानलाई प्रति बिरुवा १० रुपैयाँ दिने भएको छ । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि किसानले हुर्काएको फलफूलको प्रतिबिरुवा रु १० दिने भएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न ‘१ फलफूलको बोट रु १० को नोट’ कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘इच्छाकामनाको भूगोलमा फलफूल खेतीको राम्रो सम्भवना छ, किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न १… पुरा पढौ